इमरान खानकी पूर्वपत्नी रिहाम खानको आक्रोशः यही हो नयाँ पाकिस्तान ?
Home समाचार अन्तरास्ट्रिय इमरान खानकी पूर्वपत्नी रिहाम खानको आक्रोशः यही हो नयाँ पाकिस्तान ?
एजेन्सी – इस्लामाबाद, १९ पुस पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानकी पूर्वपत्नी रिहाम खानले देशको शान्ति सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोखेकी छिन् । आफ्नो कारमा आगजनी भएपछि पूर्वपत्नी रिहामले सरकारप्रति आक्रोश पोखेकी हुन् ।
शृंखलाबद्ध ट्विटमा रिहामले प्रश्न गरेकी छिन्, ‘यही हो इमरान खानको नयाँ पाकिस्तान?’ एउटा अज्ञात समूहले आईतबार राती रिहामको गाडीमा आगाे लगाइदिएकाे थियो । आगजनीको समयमा गाडीभित्र रिहामका सहयोगी र चालक थिए ।
‘भतिजाको विवाहमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले मेरो गाडीमा आगजानी गरेका छन् । आगजानी हुँदा मेरा सहयोगी र चालक गाडीभित्रै थिए । यही हो इमरानको नयाँ पाकिस्तान ? ठग र लोभीको सरकारलाई स्वागत छ,’ उनले ट्विट गरेकी छिन् ।
सरकारको प्रखर आलोचकसमेत रहेकी रिहामले आगजनीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
दन्डहीनताका कारण खान नेतृत्वको सरकारमा गुन्डागर्दी र डकैतीले प्रश्रय पाएको उनको भनाई छ । ‘म औषत पाकिस्तानीजस्तै बाँच्न र मर्न चाहन्छु । कातरपूर्ण हमला वा दन्डहीनता जेसुकै भए पनि आक्रमणको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ,’ उनले लेखेकी छिन् ।
Previous articleदक्षिण कोरियामा हुने अधिकांश आगलागीमा बिराला दोषी
Next articleपाणिनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष गौतम कांग्रेसमा
तालिबानले ISKP लाई अफगानिस्तानको सबैभन्दा गम्भीर दुश्मन मान्दछ